ဝေဟင်ထက်မှလျှပ်စစ်ဝါယာကြိုးများ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းပေးသည့် တရုတ်အမျိုးသမီးပင့်ကူလူသားများ - Xinhua News Agency
ဝေဟင်ထက်မှလျှပ်စစ်ဝါယာကြိုးများ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းပေးသည့် တရုတ်အမျိုးသမီးပင့်ကူလူသားများ
ကူမင်း၊ မေ ၆ ရက် (ဆင်ဟွာ)
တရုတ်နိုင်ငံ အနောက်တောင်ပိုင်း ယူနန်ပြည်နယ် ကူမင်းမြို့တွင် ဝေဟင်မှဓါတ်အားပို့လွှတ်သည့် ဝါယာကြိုးများကို ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးလုပ်ဆောင်နေသည့်အမျိုးသမီး ပညာရှင်နှစ်ဦးနှင့် တွေ့ဆုံကာ ၎င်းတို့၏ လုပ်ငန်းများအား လေ့လာနိုင်ရန်ရိုက်ကူးထားပါသည်။ (Xinhua)
GLOBALink | Gen Z in China: “Spiderwomen” keep overhead wires running
Two female technicians work like “spiderwomen” to keep the overhead wires running in Kunming, southwest China’s Yunnan Province. Click to see their story. #GLOBALink #GenZinChina
ရှန်ဟိုင်းတွင် ကပ်ရောဂါတိုက်ဖျက်မှုအား ကူညီပေးသည့် စေတနာ့ဝန်ထမ်း စက်ရုပ်များ